ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား လွှတ်ပေးရန် သင့် မသင့် လျှောက်လဲချက်တင် ရုံးချိန်းတွင် ကျန်းမ?? - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား လွှတ်ပေးရန် သင့် မသင့် လျှောက်လဲချက်တင် ရုံးချိန်းတွင် ကျန်းမ??
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်း ထောက်နှစ်ဦးအား ထပ်မံတရားစွဲဆိုစစ်ဆေး ခြင်းမပြုဘဲ လွှတ်ပေးရန် သင့် မသင့်ကို လာ မည့်ရုံးချိန်းတွင် အမိန့်ချမှတ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို လွှတ်ပေးရန် အတွက် သတင်းထောက်များ၏ရှေ့နေများက ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၈ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၃ (၂)အရ လျှောက်ထားမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အရင်အပတ်က ကျွန်တော် တင်ထား တဲ့ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံသင့် မသင့် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက် ဒီနေ့ပေးတာပါ။ ပုဒ်မ ၂၅၃(၂)အရ ဒီအဆင့်မှာကိုပဲ သက်သေတွေ စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကနဦးသက်သေခံချက် မပေါ် တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ကို လွှတ်ပေးပါဆိုပြီး လျှောက်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရုံး ချိန်းမှာ လျှောက်လဲချက် ခိုင်မာအောင် ဥပဒေ ပုဒ်မတွေ၊ လျှောက်လဲချက်တွေနဲ့ ကိုးကားပါ တယ်။ အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ထားတယ်။ ကျန်တာကတော့ တရားသူကြီးအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်”ဟု သတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။ ယင်းကြောင့် လာမည့်ရုံးချိန်း၌ ကျန်ရှိ သည့် တရားလိုပြသက်သေများကို စစ်ဆေး သွားမည်မဟုတ်ဘဲ လွှတ်ပေးရန် သင့် မသင့် ကိုသာ အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၄ ရက် ရုံးချိန်းတွင် သတင်းထောက် နှစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရာ၌ အခက် အခဲတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ကြားသိရသည့်အပေါ် မေးမြန်းရာ၌လည်း ”ရိုက်တာသတင်းထောက် တွေဘက်က မိသားစုဆရာဝန်က ကိုဝလုံးတို့ ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ကိုယ်တိုင် စစ်စရာရှိတာပေါ့။ အဲဒါကို လွတ်တဲ့အချိန်လေး မှာ စစ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဥစ္စာက တရား သူကြီးရဲ့အမြင်မှာ တရားရုံးရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို နှောင့်ယှက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒါ ရဲမှာ တာဝန် ရှိတယ်။ တရားသူကြီးက တားခိုင်းတယ်။ ရဲက တားလိုက်တယ်။ ဒါပါပဲ”ဟု ရှင်းပြသည်။ ရုံးချိန်းအား ဧပြီ ၁၁ ရက်သို့ ထပ်မံ ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် တရားလိုပြသက်သေ ၂၅ ဦးအနက်မှ ၁၇ ဦးကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ် ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့က သတင်းထောက်တစ် ယောက်အနေနဲ့ သတင်းတွေကို ကြိုးစားပြီး လိုက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောက်ဆုံး ကိစ္စကလဲ ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်တယ်ဆိုပြီး အပြော ခံရမှာကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်ခဲ့တာ မရှိဘူး။ သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ကိုလဲ ခါးဝတ်ပုဆိုး လိုမျိုး မြဲမြံအောင်လဲ အမြဲတမ်းကျင့်ကြံပြီး တော့ နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဖမ်းဆီး ခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံး က ပြောကြားသည်။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တောဒေသတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီ အရင်ခံစာ စာရွက်စာတမ်းများ လက်ဝယ် တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်ညတွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ထောက်ကြန့်ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုထား ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုနာကို အားကစား ဒါရိုက်တာ အဖြစ် အီမန်နာလို ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရ
အပူချိန် မြင့်မားနေမှုကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော လူနာများအတွက် မလှိုင်ပြည်သူ့ဆေ?